15 Swimsuits Crazy kubantu Abathanda LOL
Phambukisa Amehlo Akho, Abantwana ... Ixesha Le-Swimsuit Lilapha!
Ngubani onokulibala ukuba umntu onohlaza-onyanwe nguSacha Baron Cohen e- Borat? Emuva ngo-2006, ukhetho olungathandabuzekiyo lukaChohen kwi-swimwear bekuthethwa yihlabathi-kunye nokuhleka! Mhlawumbi kwakungumfanekiso kaBotat owawushukumisela ukuhamba kwindlela yokuthambisa ngokutsha: ukwenza iqabane lakho kunye nabanxwemeni behleka ngokukhawuleza xa befumana umthwalo wakho wengubo ebhantshi enqabileyo!
Uninzi lweemigodi ezilandelayo zizonke, i-100% yangempela kwaye iyatholakala ukuthenga. Into eyona nto ibuhlungu ngaphezu kokubukela umntu wenza isisu esibuhlungu esilumkileyo kuyakufuneka ibukele umntu ephosa izinto zakhe ngelixa ephethe i-suit-chest-suit suiting suit. Ewe-yinto ekhoyo ngokwenene. Yeyiphi ixesha lokuphila!
Ukuba sinyanisekile ngokuqinisekileyo, asiqinisekanga ukuba ngubani na owaziyo ngokwenene ukhaliphe ngokwaneleyo ukuya kumdlalo omnye walezi zinto eziphambeneyo. Ngaba unxibe enye? Zihlole kwaye ubuyele kuthi.
Iibhokhwe ezinomso ziphephile kakhulu ngoku
Ewe, ngokucokisekileyo ... le nto ekhoyo! Iingubo ezithandwayo, inkampani ezisa iingubo ezininzi ezenziwe ngokucacileyo ukuba zenzelwe iinjongo zokuzonwabisa , ziye zazisa isambatho sokuhlamba ihlobo le ntsimbi enye. Le safu ivela kwiintlobo zeentlobo zeenyama kwaye inika into yokuba umntu onxibayo unesidingo seseshoni esichukumisayo! Ukuba ufuna ihlabathi likhangele kuwe kwaye lingaboni nto kodwa i-curly, iinwele zomzimba we-wavy, le suit isele kuwe!
Into kuphela ekhoyo ekhoyo, i-interm ... sisitsho njani le nto ngokucokisekileyo? Ummandla "phaya phaya" unqabile ukuba uphelelwe iifutshane kunye neengqungquthela. Yonke into esinokuyithetha kubenzi beli qabane iyabulela ukulunga ngenxa yamanqaku amancinci.
Ungathenga le saziso apha, ukuba uyalindela!
I-Kitten Eating Pizza kunye neTaco
Kutheni kufuneka ukuba abafazi bahlekise? Kukho iintlobo ezininzi ezinqabileyo ezinqamlekileyo zokubhukuda ngaphandle kweenqanawa ezingenakuzithatha kakhulu. Isithuthi esithile sinobunzima beenkikazi ngqo kwi-crotch , kwaye ngokwemvelo ukuba intsana iyanandipha ukutya okuthandayo kwe-intanethi: i-tacos ne-pizza!
Hamba uye uthenge apha, ukuba iikati zidla i-junk (kwi-junk yakho) yinto yakho.
Ngaba Omnye Uthi Pizza?
Kutheni kufuneka iikati zibe neyona pizza enomnandi? Gqoka le bhisikidi ngeetayili ze-pizza ezibekelwe bucala ukuvumela ihlabathi ukuba yinto enye ebushushu ye pepperoni.
Yithenga apha, izinto ezishisayo.
Ezi zihlwele zenza Ndilambile
Ngaba omnye umntu wayala i-burger eshicilelayo ecaleni kwesosaji? Amakhwenkwe kufuneka afake kuphela ezi zixhobo ezihle xa zilungele ukubizwa ngokuthi "i-beefcake". Ngoko ngokusisiseko, bonke abafana banxiba ezi zinto.
Unokuzithenga apha, iifleff stud.
I-Zombies isenomzuzwana kwimeko yenkcubeko ye pop, ngoko ke le zombie / i-monster bikini iya kuguqula iintloko echwebeni! Lo mntu kubo bonke abafazi ngaphandle apho banomdla kuphela nge- braaaaaaiins .
Ukuthenga apha, abathandi be-zombie!
Kukho igama elilodwa kuphela lala mazwi "okududuza ikati" elifutshane: EPIC. Ezi zinto ziphupha iphupha le-intanethi.
Unokufumana ibini lakho elifanelekileyo apha.
Izinto Ziyilungele phantsi phantsi apho kuhamba khona
Nantsi i-suit ye-bhinqa elikhulile elila ukukhula! Abo bangakhange bafikelele kwi- Little Mermaid yabo . Bamba i-Ariel yakho yangaphakathi uze uthenge apha.
Ngoku kuthi, siza kuqhubeka sibiza umnquba wethu ongaphakathi kwi-black piece-piece. Ursula ebomini!
Ngoba? Kungenxa yoko kutheni! Ewe; le yintambo ehambayo eyenza i-glass-glass-egqoke uGeorge Washington egibela i-dinosaur, ngenxa yokuba. Kwaye xa uthe wacinga ukuba yinto epicic ... kukho i-lasers. Amaninzi amaninzi! Hamba uye uthenge apha - uyazi ukuba ufuna.
I-Trumped Up Swimwear
Ihlabathi lonke linombono ngoMongameli uDonald Trump; bonisa ukuxhaswa kwakho (okanye kungenjalo) kunye nalesi sigxina, esingaxhamliyo imifanekiso yoMlawuli wethu oyiNtloko. Akunjalo "uGeorge Washington ehamba ngeDinosaur," kodwa iya kwenza.
Yonke inkunzi ye-poli-sci ingakwazi ukuthenga oku apha.
Ezinye izitya zokuhlamba zibonakalisa kakhulu, kwaye ezinye zibonisa yonke into. Konke nezinto ezifihlakeleyo, uyazi, isikhumba sakho.
Bhuqa kunye nalezi zihlomelo ze-holster ezi-six-shooter. Kukho umfundisi omtsha edolophini! Ukuthenga apha, ii-cowboys.
I-Swimwear Knitted akazange ikhuphe. Iqhwaba!
Siye sabona ezinye izinto ezintle ezimbi , kodwa oko kuthatha ikhekhe! Khawucinge nje oko kwenzekayo xa lo buncwane bubuncipha.
Yiyiphi iqabane elithandekayo
Um, mama ... unamanye izandla phezu kwakho, um. Suyinaka.
Iidala zeSikolo samandulo, hlangana!
Kule ndawo unayo - i-15 yezikhwama ezimnandi kakhulu onokuzigqoka elunxwemeni kweli hlotyana. Hamba phambili, uthenge enye yale nto uze wenze uhambo olulandelayo ukuya elunxwemeni umxhasi omkhulu! Ndiyacela? Singazenza thina, kodwa akukho mntu ufuna ukukubona.
20 Amacwecwe amanqabileyo anqabileyo kakhulu ... kunye nohlobo oluthile olungcolileyo!
20 Abantu Bathatha Ukuthatha i-Selfies ekhohlakeleyo
25 Abazali Abanobuchule baTrolle abantwana babo
Top Symphonies Ufanele Ube Nakho
Izindlela zokwenza amanzi aphucukileyo ekhaya